War - shukumaan qubeys dhaqso ah ama tuwaal qubeyska suufka ah oo ka fiican
Waa kuwee kan ugu fiican, tuwaalka dhaqitaanka ee dhaqaaqa qalajinaya ama tuwaalka suufka ah ee nadiifka ah? Shukumaan dhaqe dhaqe ah oo qallalan waa alaabada tuwaalka lagu qubeysto oo ka sameysan fiilooyin superfine ah, oo dhaqso loo qallajin karo oo leh biyo dhuuqid wanaagsan iyo sifooyin dheecaan leh. Shukumaanada dharka lagu dhaqo ee inta badan loo isticmaalo hoteelada iyo guryaha martida. Mabda 'tuwaalka dhaqidda ee qallajinta degdegga ah waxaa lagu go'aamiyaa qaab-dhismeedka gaarka ah ee tuwaalka qubeyska dhaqsiyaha badan. Fibreerka shukumaanka dhaqidda dhaqsiyaha badan wuxuu qaataa tiknoolajiyad casri ah oo casaan ah, taas oo si weyn u kordhisa farqiga u dhexeeya farqiga tuwaalka qubeyska, taas oo kor u qaadeysa nuugista biyaha ee tuwaalka qubeyska. Sidaa darteed, shukumaanada dhaq-dhaqidda dhaqidda ayaa aad waxtar u leh.
Shukumaanada dhaq-dhaqidda dhaqsiyaha badan ayaa si dhakhso leh uga soo nuugi kara qoyaanka jirka, ka dibna u dhiga qoraxda si ay ugu qallajiso illaa toban daqiiqo, taas oo aad ugu habboon. Isla mar ahaantaana, tuwaalka dhaqidda dhaqsiyaha-qallalan wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan, raaxo, jilicsanaan, qurxin wanaagsan, iyo waxqabad qaali ah, oo aad ugu habboon isticmaalka maalin kasta.
Tuwaallada dhaq-dhaqidda dhaqsiyaha badan ayaa aad ugu habboon in la nadiifiyo. Waxay guud ahaan nuugaan wasakh inta udhaxeysa fiilooyinka (halkii ay ka ahaan lahaayeen fiilooyinka). Intaas waxaa sii dheer, faybarku wuxuu leeyahay jilib sare iyo cufnaan sare, sidaas darteed wuxuu leeyahay awood xayeysiin xoog leh. Isticmaalka ka dib, kaliya biyo nadiif ah ama in yar oo maydhis ah Wakiilka waa la nadiifin karaa.
Waa kuwee kan ugu fiican, tuwaalka dhaqitaanka ee dhaqaaqa qalajinaya ama tuwaalka suufka ah ee nadiifka ah?
1. Tuwaallada saafiga ah ee suufka saafiga ahi waa kuwa ugu badan ee tuwaal lagu maydho suuqa, badiyaaana leh nusqaanno waaweyn. Ka dib marka la maydho, waxay badanaa u baahan yihiin in la qalajiyo maalin. Tuwaallada dhaq-dhaqaaqa dhaqsiyaha badan waxaa loo yaqaan dhaqso-dhaqasho. Muuqaalka ugu muhiimsan waa inay si dhakhso leh u qalajin karaan ka dib isticmaalka, taas oo ku habboon isticmaalka xiga.
2. Marka shukumaanyada suufka ah ee suufka ah ee suufka ah la adeegsado, gaar ahaan tuwaalada qubeyska ee dabiiciga ah, siigada, dufanka, wasakhda, iwm dusha sare ee shayga la tirtirayo ayaa si toos ah u galaya faybarka. Isticmaalka ka dib, waxay ku sii jirtaa faybarka mana fududa in laga saaro. Waqti dheer kadib Xitaa way adkeyn kartaa oo lumin kartaa dabacsanaanta, taas oo saameyn doonta isticmaalka caadiga ah mustaqbalka. Hase yeeshe, tuwaalka qubeyska dhaqsiyaha-qalalaya wuxuu nuugaa wasakh inta u dhexeysa dunta (ma ahan gudaha fiilooyinka). Intaas waxaa sii dheer, faybarku wuxuu leeyahay jilib sare iyo cufnaan sare, sidaas darteed wuxuu leeyahay awood xayeysiin xoog leh. Isticmaalka ka dib, waxay u baahan tahay oo keliya in lagu nadiifiyo biyo ama wax yar oo nadiifiye ah.
3. Nolosha adeegga ee tuwaallo dhaq-dhaqidda dhaqsiyaha badan iyo tuwaallo nadiif ah oo cudbi ah ayaa sidoo kale ka duwan. Badanaa shukumaanada dhaq-dhaqidda dhaqsiyaha badan waxay leeyihiin astaamaha xoogga sare iyo adkaanta adag, sidaa darteed noloshooda adeeggu waxay gaari karaan in ka badan 4 jeer nolosha adeegga ee tuwaallada caadiga ah ee lagu maydho. Aan qalloocin. Laakiin tuwaalada suufka ee suufka saafiga ahi ma gaari karaan saameyntan.